Izindleko Zedatha Eningi Kakhulu | Martech Zone
ULwesihlanu, May 31, 2013 ULwesine, May 30, 2013 UKelsey Cox
Nsuku zonke, 2.5 quintillion byte wedatha zenziwa izinhlangano zokuthengisa nezentengiso. Yize ukugcina izintaba zedatha ngethemba lokuthola imininingwane engenzeka kungabonakala njengokusebenzisa ngempumelelo isikhathi nemali yamabhizinisi, izindleko ezihlobene nazo zingakumangaza.
Kamuva infographic owadalwa Izinjini ze-Lattice wembula lokho Ama-88% amaqembu okukhangisa alahlekelwa ngamathuba ebhizinisi ngenxa yolwazi olunganele. Kulabo okuhloliwe nabo, Ama-24.5% azizwe ephonselwa inselelo yidatha nesikhathi esithathwayo ukucwaninga, ngenkathi bonke abanye abaphendulile bengahlomile kahle noma bengenantshisekelo yokuphatha kahle ukungena kwabantu ngemininingwane.
Ngaphezu kokushoda okwanele isu elikhulu ledatha, ukugcina nokuhlaziya imininingwane empeleni ukubiza amabhizinisi imali enkulu. Ukuthengiswa okujwayelekile kuchitha isilinganiso se- Amahora ama-4 / iviki elungiselela ukuthengisa, futhi ngokuthengiswa okuyisigidi esisodwa e-US, lokhu kufinyelela ku- $ 50 billion ngonyaka.
Nakhu ukubukeka okujulile kokutholwe yiLattice:
Tags: idatha enkuluisu elikhulu ledathaIdathaisitoreji sedathainfographicisu